Nbudata Yakovlev Yak-40 FSX & FSX-Steam - Rikoooo
downloads 19 886
Igor Suprunov (Suprunov Design) FSX ngwugwu site na Andrey Vinogradov
Ihe pụrụ iche add-on nke na-enweghị atụ dị mma na nkọwa dị elu, chọpụta Yakovlev Yak-40 na ụdị a maka FSX na FSX-Steam, ịme anwansị nke ụgbọ elu ahụ dị elu na-eme ka ọ bụrụ ihe dị oke mgbagwoju anya maka novices, akwụkwọ ntuziaka ahụ bụ ibe 123 (PDF) ma ga - abụ arụnyere na gị na desktọọpụ. The mebere kokpiiti (VC) a n'ụzọ zuru ezu modeled na HD na 3D Russian gauges.
Russian add-ons dị n'etiti ihe kachasị mma dị adị ma ọ bụghị n'efu, ndị na-eme programmụ Russia / ndị na-ese ihe hụrụ n'anya n'anya na nkọwa zuru oke, na-atọ anyị ụtọ.
O dikwa oke mkpa na-agụ akwụkwọ tupu ị chọwa a ụgbọ elu (a ụgbọ elu mgbe niile amalite engines anya), Na luckily na akwụkwọ dị na English / Russian.
Nke a bụ ihe zuru ezu mkpọ na omenala ụda, HD VC, omenala gauges, ntuziaka, 14 repaints na ọtụtụ ndị ọzọ.
GB WARG WAR WARD, AH,, gwa gị na n'oge ụgbọ elu ma ọ bụrụ na ị banye n'ụgbọ elu ọzọ FSX ga-akụda, yabụ ghọta na oge ụgbọ elu na-efe efe, ịnweghị ike ịgbanwe n’enweghị ihe mgbawa. Ka o sina dị, ogo nke add-on karịrị nsogbu ahụ.
Repaint gụnyere Aeroflot, Air Enterprise Bryansk, S7, KrasAir, UTAir, Life, Uzbek, Yamal, Yak Service, Sukhoi, Poland Air Force, Gazprom, Czechoslovak Airlines, Uzbekistan Airways.
The Yakovlev Yak-40 bụ obere atọ engined mpaghara iga ugbo elu nke Soviet ọha mmadụ na Russian Yakovlev. Ya mbụ ụgbọ elu na ụbọchị nke 1966. Ọ na-e nyere ọrụ na September 1968 site Aeroflot.
Ọsọ kacha: 550 km / h
Arọ: 9400 kg
Ogologo: 20 m
Anya passable 1 800 km
Unit na-eri: 60 000 ka 210 000 USD
Mbụ ụgbọ elu: October 21, 1966
Onye edemede: Igor Suprunov (Suprunov Design) FSX ngwugwu site na Andrey Vinogradov